Koongo DRC oo Iska Diidday Deeq Loo Uruurin Lahaa. Muxuu Yahay Farqiga U Dhaxeeya Iyaga Iyo DF? – Shabakadda Amiirnuur
Koongo DRC oo Iska Diidday Deeq Loo Uruurin Lahaa. Muxuu Yahay Farqiga U Dhaxeeya Iyaga Iyo DF?
April 14, 2018 9:01 am by admin Views: 82
Jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Koongo, ayaa ka soo hor jeesatay shir dhaqaale loogu uruurun lahaa oo ay Qaramada midoobay ku qaban lahayd magaalada Geneva ee dalka Swezarland.
Shirka oo Kongo, loogu uruurin lahaa lacag sama fal ah oo gaareysa 1.7 Bilyan oo doolar, ayaa hindisaha qabashadiisu timid kadib markii ay Qaramada midoobay sheegtay in dad ka badan 13 milyan oo dalkaasi u dhashay ay u baahan yihiin gargaar bani’aadannimo.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in xaaladda dalkaasi ay tahay mid aad u liidatay. Balse dawladda Koongo, ayaa sheegtay in laga badbadiyay arrintaasi lana gaarsiiyay heer adag oo xaqiiqda ka fog.
Haddaba iyadoo ay sidaa tahay, ayaa waxaa hey’adaha Sama falka laga soo xigtay in dad gaaraya 4.5 milyan ay si khasab ah guryahoodii uga carareen sababo la xiriira xasillooni darro iyo macaluul daran.
Wakaaladaha wararka ayaa dhankooda soo daabacay sawirro muujinaya dad ay tiradooda ku sheegeen tobannaan kun oo reer Koongo ah oo ka gudbaya soohdinta ay la wadaagaan Uganada.
Koongadan, ayaa hodan ku ah macdanta iyo kheyraadka dabiiciga ah, waxaana jira dowlado reer galbeed ah oo doonaya inuu dalkaasi noqdo mid aan nabdooneyn oo laga cararo si ay mustaqbalka dhow uga faa’iideystaan kheyraadkaas.
Qaramada midoobay, waxay dhankeeda ku adkeysanaysaa in dhibaatada ka taagan dalkaasi ay mareyso heerkii ugu darnaa oo ay waliba ku tilmaantay mid deg deg ah.
” Tani waxay ka sarraysaa xaaladda ka taagan dalalka Yemen iyo Suuriya marka la eego tirada dadka baahida daran qaba” sidaasi waxaa yiri’ Jan Egeland oo ah madax ka ah hay’adda Norwegian Refugee Council, xilli uu dhawaan kasoo laabtay safar uu ku tegay jamhuuriyadda Koongo DRC.
Dowladda wadankaasi, waa ay diiday warbixinada iyo qiimeynta Qaramada midoobay iyadoo sheegtay in xaaladda la buunbuuniyay oo la gaarsiiyay meel aan xaqiiq ahayn.
Arrintan waxay ku tuseysaa in dowladaha Afrika qaarkood yihiin kuwa dareensan dhagaraha reer galbeedka iyo boobka lala damacsan yahay Kheyraadkooda, laakin waxaa si taa bil cagsi ku ah u dhaqma dowladda Federalka oo caan ku ah in ay shisheeyaha uu yeerto dhaca hantida ummada iyadoo golayaasheeda iyo madaxdeeduna Usbuuc walba saxiixaan heshiisyo dhagar ku ah diinta, dalka iyo dadka intaba.